Gandaki Sanchar » जन्मदिन मनाउने छुट्टै शैली, यसरी मनाए विद्यार्थी नेता पौडेलले जन्मदिन !!
जन्मदिन मनाउने छुट्टै शैली, यसरी मनाए विद्यार्थी नेता पौडेलले जन्मदिन !!
माघ १३, पर्वत । जन्मदिन मनाउने सबैका आ–आफ्नै तरिका हुन्छन् । कसैले केक काटेर मनाउने गर्छन । कसैले साथीभाइहर्रुलाई पार्टी दिएर मनाउने गरेका उदाहरण प्रशस्त भेटिन्छन् । तर, नेपाल विद्यार्थी संघका नेता शिशिर शर्मा पौडेलले आफ्नो जन्मदिन फरक ढंगले मनाए ।
प्रकाशित मिति १३ माघ २०७६, सोमबार १५:०२